विपद्ले नफेरेको मति- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १२, २०७६ यादव देवकोटा
काठमाडौँ — बुधबार बिहानै धादिङको नौबिसेलाई केन्द्र बनाएर ५.२ रेक्टरको भूकम्प गएपछि सामाजिक सञ्जालमा आएकाअनेकौं टिप्पणीमा कसैले लेखेको छ– ‘भूकम्पले तर्साउन छाडेको छैन । हामीले आपतविपतमा उभिन मिल्नेसम्मको ठाउॅ पनि नछोडी खुला स्थान साँघुर्‍याउॅदै गएका छौं । २०७२ कै उत्पात दोहोरियो भने हाम्रो हालत झन् खराब हुनेतिर गइरहेछ ।’
०७२ वैशाख १२ को दिन ११.५६ मा भूकम्प जाँदा म काठमाडौं–पोखरा याक्राका त्रममा खैरेनीटार नजिक पुगेको थिएँ । काठमाडौँ र गोरखामा रहेका परिवारसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा टेलिफोनमा नेटवर्क नै नआएपछि मुटु हल्लिने क्रम बढ्दै थियो । झन्डै पोखरा पुग्ने बेला मोबाइल इन्टरनेट चलाएर सामाजिक सञ्जाल हेर्दा कसैले पोस्ट गरेको पढ्छु– गोरखाको बारपाक केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले देशभर विपद् !
बारपाकबाट केही घण्टाको दूरीमा छ घर, गोरखा पन्द्रुङमा । बाआमा उतै ओतिएका । भूकम्पको केन्द्र–घर नजिकै । प्रलयकारी खबरका लागि तयार हुँदै बारम्बार प्रयासपछि काठमाडौँमा सम्पर्कमा आएको भाइले भन्यो– काठमाडौंमा त सबै ठीक छ, घरतिर पो के सुन्नपर्ने हो !
कैयन्पटक प्रयास गर्दासमेत गोरखा गाउँमा रहेका कसैसँग पनि सम्पर्क गर्न सकिएन । त्यहीबेला महसुस भयो, केही लाख मानिसले मोबाइल दाब्नासाथ गञ्जागोलमा फस्ने हाम्रो टेलिफोन क्षमता । अबेर फोन आयो बाको– हामी सबै ठीक छम् । गाउँमा कसैलाई केही भएको छैन । घरचाहिँ पूरै भत्कियो । गाउँमा सबैजसो घर भत्किएको छ ।
भोलिपल्ट बिहानै पूर्वयोजनालाई थाती राखेर गोरखा फर्किन खोज्दा सार्वजनिक सवारी साधन त परै जाओस् कोही ट्याक्सीवाला पनि तयार भएनन् राजमार्गमा गुडेर गोरखा मोडिन । धेरै चालकसँग बनिबनाउ जवाफ थियो– सडक ठाउँठाउँमा चिरा परेको छ । पहरा खसेर सडक पुरिएको छ । एम्बुलेन्स नै जान सकेको छैन । काठमाडौँ जाने सडकै चिरा परेर कति गाडी फसेको छ ।
सधैंजसो पोखरा जाँदा चढ्ने गरेको ट्याक्सी चालक चित्र गुरुङ । जहाँसम्म जान्छ लगिदिन्छु भनेर कस्सिएका चित्रसँग राजमार्गमा बत्तिँदै गोरखाबजार पुग्दासम्म पनि सडकमा कुनै समस्या नदेखिएपछि उनै चित्रले भने– ठाउँठाउँमा पुलिस छ । मानिसलाई राजमार्ग नै ध्वस्त भयो भन्ने परेको छ । कमसेकम आन्तरिक सञ्चारबाट राजमार्गको अवस्था बुझेर चालकहरूसम्म सूचना ल्याउन सकेको भए, मानिसले बिचल्ली पर्नुपर्ने त थिएन !
सदरमुकाम पुगेपछि केही सूचना छ कि भनी प्रशासनतिर मोडिएको, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं ओहो ! तपाईं कसरी आइपुग्नुभयो ? सडक गाडी चल्न सक्ने अवस्थामै छ ? पो भन्छन् । गाउँतिरको क्षतिबारे आफूहरूकहाँ कुनै सूचना आइनपुगेको र प्रहरीको स्थानीय टोली अपुग भएकाले जिल्लाबाट सूचना संकलनका लागि सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालित गर्न लागेको जानकारी पाएपछि सदरमुकाममा बसिरहनुको कुनै अर्थ थिएन । प्रसंगवश, विपद्का दिनमा सबैभन्दा प्रशंसनीय नेतृत्व क्षमता देखाउनेमा तिनै सैनिक, प्रहरी र चालकहरू थिए ।
सदरमुकामभरि चहार्दा भेटिएको एउटा खुला पसलमा केही थान पाल किनेर गाउँको बाटो तताउँदा ४ घण्टाको बाटोभर एकजना पनि यात्रु भेटिएनन् । स्थानीयहरू भत्किएको घरछेउ के गर्ने, कसो गर्ने मेसो नपाएर अलपत्रिएका देखिन्थे । बाटोमा हिँडेको नयाँ मान्छे राहतको खुटखबर लिएर पो आएको हो कि भन्ने आसमा ती भन्थे– भैंचालो गएपछि यो बाटो हिँड्ने तपाईं नै पहिलो नयाँ मान्छे हो, केही छ कि खबर ?
तिनलाई–‘गाउँमा शिक्षक, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको टोली बनाएर मान्छे र भत्किएका घरहरूको अवस्थाको लागत तयार गर्दै गर्नुभयो भने काम गर्न सजिलो पर्ला । सबैभन्दा असजिलो अवस्था भोगेका, परिवारका सदस्य गुमाएका या घाइते भएकाहरूलाई सहयोगको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ।
सरकारले विस्तारै सहयोगको घोषणा गर्ला नि’ भन्नेबाहेक मैले तत्काल गर्न सक्ने केही थिएन । त्यसले प्रश्न उठायो मनमा– अरू बेला वन, खानेपानी, सडक उपभोक्ता, क्लब भनेर विभिन्न समितिमा भाग खोज्दै नेतृत्व लिएकाहरू कहाँ हराए गाउँबाट ? विपद्को बेला त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने, कसरी सामना गर्ने भन्ने प्राथमिक शिक्षाको कति अभाव र महत्व छ हाम्रो जस्तो देशमा !
विभिन्न संघ/संस्थामा नेतृत्वका लागि लडभीड गर्नेहरू विपद्का दिनमा बेपत्ता भए । यति लाख र उति लाख सदस्य छ भनेर दाबी गर्ने पार्टीहरूको जम्माजम्मी राष्ट्रिय क्षमता भूकम्पले नांगेझार पारिदियो । नेपाल नै सखाप भयो भन्ने शैलीमा भएका बाहिरी प्रचारको तथ्यपूर्ण जवाफ दिन नसक्दा आजसम्म पर्यटन क्षेत्र उठ्न सकेको छैन । नेपाल नै ‘कोल्याप्स’ भयो भने जसरी उठाइएको पैसा कसले कहाँ लग्यो, कसले कति उठायो कसैलाई हिसाब देखाउनुनपर्ने मनपरी अवस्था देखियो ।
उमेरले गलाउँदै लगेका बाआमाहरू मात्रै बस्ने गाउँमा सबैभन्दा पहिले पुगेपछि उनीहरूलाई त्यसै ढाडस मिलेजस्तो भएछ । त्यसले सिकायो अप्ठेरो समयमा उमेर भएका छोराछोरी आफू नजिक भइदिए मात्रै पनि बाआमालाई धेरै भर हुने रहेछ ।
अर्को दिन स्थानीय शिक्षक, राजनीतिकर्मी, रैथाने भेला पालेर क्षति भएका घरको अवस्था र तिनको लगत तयार गर्न समिति बनाएपछि अन्य गाउँमा जान झोला कस्छु । ताकु, लाकुरीबोट हुँदै बारपाक पुग्दासम्म मनको अत्यासले चिमोट्दै जान्छ । जहाँ घरहरू पूरैजसो ढलेका छन् । कैयन् परिवारले आफन्त गुमाएका छन् ।
सदरमुकाम, चितवन या नजिकका शहरमा बस्ने बारपाकी तन्नेरीहरू बाइकमा एकादुएक फर्किएका रहेछन् । उनीहरूसँग पनि स्थानीय तवरमा समिति बनाएर मृतक, घाइते, घरहरूको विवरण तयार गर्ने सल्लाह गरेर स्वाँरा हुँदै गाउँ फर्कंदासम्म गाविस सचिवको अत्तोपत्तो छैन । जो पठाइएका थिए स्थानीय प्रतिनिधिको अभावमा पूरै गाउँ सम्हाल्न । त्यही दिन लाग्यो, गाउँमा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै भइदिएको भए ! तल्लो तहसम्म स्थानीय सरकारको सञ्जाल भएको भए !
त्यसलगत्तै सुरु भयो, राहतको लिगलिगे दौड । आकाशमा हेलिकप्टरको ताँती । जमिनमा राहत बोकेका गाडीहरूको लस्कर । कसलाई राहत दिनुपर्ने, को आफैं अरूलाई राहत दिनसक्ने अवस्थामा छ, बेहिसाब । खेतीपाती नै छाडेर राहत थाप्न दौडधुप । राहत थापेको चामल र चिउराले कटेरो भरिएपछि खेती गर्न छाडेर तास खेलेर समय गुजार्ने विकृति । त्यही बीचमा पनि राज्यले हेर्न नभ्याएका अदनाहरू ।
काठमाडौंमा तीनवटा घर भएकाहरूसमेत दौडिएका छन्, गाउँमा राहत पाउनेमा नाम लेखाउन । तीन पुस्तादेखि ऐलानी जमिनमा बसेकी मेरो गाउँकी दिदी सेती तामाङ भने लालपुर्जा भएको जमिन देखाउन नसक्दा छुटेकी छन् राहत सूचीबाट । उनी बिहे गरेर गएकी थिइन् अर्को गाउँमा । श्रीमान् अर्की श्रीमती लिएर बेपत्ता भए, उनी र बच्चाहरूलाई बिजोग बनाएर । न बिहे दर्ता छ, न श्रीमान्को नै कुनै पूर्जावाल जमिन । फर्किइन् उनी माइतमै र बसेकी थिइन् डेढ दशकदेखि ।
सेती दिदीले घर बनाउन पाउने भए, उनको नाममा घर बनाउने जमिन पास गरेर दिन तयार हाम्रै सामुन्ने बिहे गरेर गएको गाविसबाट उनले राहत नबुझेको कागज बनाएर ल्याउनुपर्ने सर्त । उताबाट सगोलको परिवारले राहत बुझिसकेकाले कागज दिन नसक्ने अड्को । सदरमुकामदेखि काठमाडौंसम्म घर भएकाहरूले राहतमाथि राहत पाउँदा सुकुम्बासी सेती तामाङको परिवार फेरि पनि घरबारविहीन ।
हामीले १९९० माघ २ को भूकम्पबाट चेतेको भए २०७२ को भूकम्पपछिका दिनमा रानो हराएको मौरीको हालत बेहोर्नुपर्ने थिएन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वेबसाइटमा अद्यावधिक गराएको सूचनाअनुसार ८७९० मृत्यु, २२३०० घाइते र ५०१५०८ लाख घर, विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा, पुरातात्त्विक भवनहरू भत्किएको बारपाक भूकम्पपछि काठमाडौं विमानस्थलमा विदेशी विमान र सैनिकको लर्को लाग्दासमेत तिनी कसरी एकाएक काठमाडौं ओर्लिए, हाम्रो आवश्यकता के हो भन्नेमै रनभुल्ल पर्नु पर्थेन ।
नब्बे सालको त परै जाओस् बहत्तर सालको विपद्को दुःखबाट चेतेको भए, निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिएर एकद्वार प्रणालीमार्फत जनतामा पुग्ने प्रयास गरिएको भए बारा, पर्साको हुरी प्रभावितहरूलाई पाँच जना नेताले समाएर एक बोरा चामल दिएको फोटो हामीले हेरिबस्नुपर्ने थिएन । नागरिकहरूलाई मगन्ते र नेताहरूलाई दानवीर देखाउने सामन्तवादी व्यवहारले ‘समाजवाद उन्मुख’ देशका नागरिक डामिने थिएनन् ।
नब्बे सालमा भूकम्प जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरमा गरी ८ हजार ५ सय सिपाही थिए । उपत्यकमा मात्रै ५५७३९ घर अर्थात् झन्डै ५५ प्रतिशत घर भत्किएका थिए (ब्र≈मशमशेर–नेपालको महाभूकम्प १९९०, पृ ११) । जुद्धशमशेर काठमाडौं वरिपरि पहाड भएकाले भुइँचालोलाई त्यसले रोक्छ भन्ने ठान्थे (सम, बालकृष्ण– मेरो कविताको आराधन, पृ ३७५) । त्यसको ८२ वर्षपछि गएको भूकम्पमा त्यस समयको भन्दा सहरमा निकै कम क्षति र नागरिकहरू अझैं पुनर्निमार्णको सकसपूर्ण अवस्थाबाट निस्कन सकेका छैनन् ।
नब्बे सालको महाभूकम्पपछि सहरको पुनर्निमार्णका क्रममा वसन्तपुर दरबार जाने सडकमा जुद्ध सडक बनेको थियो । त्यसअघि नै सेतो दरबार आगलागीबाट सिकेर देशमा जुद्ध बारुणयन्त्र झिकाइएको थियो (राणा, प्रमोदशमशेर–राणा शासनको वृत्तान्त, पृ २६८) । तर बहत्तर सालको भूकम्पबाट चेतेर हामीले तयार गरेको नयाँ संरचना के हो भनेर कसैले सोधे हामीसँग जवाफ छ– झन् असुरक्षित घरहरू । साँघुर्‍याउँदै लगिएका सार्वजनिक खुला जमिन ।
अझै हामीले चेतेनौं, बारपाक भूकम्प र बारा विनासमा भएका कमजोरीलाई हटाएर विपद्को सामना गर्न सक्ने स्थानीय खुबीको विकास गर्न सकेनौं भने नागरिकहरू शासकको दयामा बाँच्ने निरीह बनाइरहनेछन् । विपद्मा राज्यबाट सहयोग पाउने नागरिक अधिकार हो ।
तर, नेताहरूले दयाको, टीठको वितरण गर्न केही पोका चामल बोकेर फोटो खिचाउने कामलाई करुणाको जलप लगाउन छाडिएको छैन । कहीँ विपद् परेको समाचार आउन पाउॅदैन राहतको नाममा चन्दा उठाउन तम्तयार पेसेवरहरू तयारी अवस्थामा छन् । तर, विपद्को प्रणालीगत व्यवस्थापनको हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता अलपत्र छ । यसरी त समाजवादमा हैन, राणाकालको हुकुमी मनोमानीमा पनि पुगिन्न ।
twitter : @gaunkomanchhey
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:२७
सकियो आठौं खेलकुद, नवौं गण्डकीमा
वैशाख १२, २०७६ कुशल तिमल्सिना
बाँके — केही कमजोरी र विवादलाई थाती राखेर प्रदेश ५ का ५ जिल्लामा आयोजित आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । वैशाख ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको प्रतियोगिताको समापन नेपालगञ्ज रंगशालामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि मण्डललाई नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै । तस्बिरहरू : केशव थापा/कान्तिपुर
राष्ट्रिय खेलकुदमा ३५ खेलका लागि ५ हजार २ सय ११ (२ हजार ८ सय २५ पुरुष, २ हजार ३ सय ८६ महिला) खेलाडीले ३ सय ३२ स्वर्ण, ३ सय ३२ रजत र ४ सय ८० कांस्यलाई प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उद्घाटन वैशाखमा भए पनि प्रतियोगिताका खेलहरू चैत २७ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।
आठौं खेलकुदमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले सबैभन्दा धेरै पदक जितेर पुनः च्याम्पियन बन्यो । सातौंमा पनि आर्मी नै च्याम्पियन बनेको थियो । नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लबले क्रमसः दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरे । कर्णाली प्रतियोगिता आठौं खेलकुदमा पनि कमजोर देखियो । अन्य प्रदेशका खेलाडीको प्रदर्शन पनि अघिल्ले संस्करणको तुलनामा खस्किएको देखिए ।
यस संस्करणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का टोलीसहित सात प्रदेश र ३ विभागीय गरी ११ टोलीको सहभागिता थियो । बाँके, बर्दिया, दाङ, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ३२ खेलका स्पर्धा हुँदा काठमाडौं, ललितपुर र कास्कीमा एक एक खेल आयोजना गरियो । अघिल्ला संस्करणमा जस्तै यस संस्करणमा पनि विभागीय टोलीकै बर्चश्व रह्यो, जुन अपेक्षाकृत नै थियो ।
कमजोर पूर्वाधार र छोटो तयारीका बीच प्रतियोगिता खेल्न प्रदेश ५ पुगेका प्रदेश टोलीहरूले विभागका खेलाडीलाई चुनौति दिनै सकेनन् । खोलामा पौडी सिकेर पोखरीमा प्रतियोगिता खेल्न आउने खेलाडीसँग वर्षैभर प्रशिक्षण गरेका खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा पक्कै पनि सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । एथ्लेटिक्समा जुत्ता नलगाई प्रतियोगितामा सहभागी भएर खेलाडीलाई देख्दा नेपाली खेलकुदमा विकेन्द्रीकरणको छनक आउँदैन ।
आर्मीबाट आठौं खेलकुदमा सहभागिता जनाएकी पौडीकी ओलम्पियन गौरिका सिंहले १२ स्वर्ण पदक जितिन् । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एकल स्पर्धामा सबैभन्दा धेरै स्वर्ण जित्ने गौरिका नै बनिन् । उनले आफूले सहभागिता जनाएका कुनै पनि स्पर्धामा दोस्रो हुनु परेन । १२ मध्ये ६ स्पर्धामा गौरिकाले आफैंले बनाएको कीर्तिमान सुधार गरिन् । बाँकी ६ स्पर्धा २५ मिटरको शर्ट कोर्षमा पहिलोपल्ट आयोजना भएकाले कीर्तिमान बनाइन् ।
गौरिकाले राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमै एकै प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान बराबरी गरिन्् । यसअघि २०६५ सालमा आयोजना भएको पााचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पौडीबाटै करिस्मा कार्कीले १२ स्वर्ण जितेर कीर्तिमान कायम गरेकी थिइन् ।
पौडीमै आर्मीकी डुवाना लामाले ६, एनआरएनका नाथान दोर्जे शेर्पाले ५ स्वर्ण जिते । जिम्न्यास्टिकतर्फ राजु राईले ५ स्पर्ण जितेर लगातार दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरे । सातौं खेलकुदमा उनले ७ स्वर्ण जितेका थिए ।
आर्मीलाई स्तब्ध पार्दै नेपाल पुलिस पुरुष भलिबलमा च्याम्पियन बन्यो । सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा महिला क्रिकेटतर्फ खेल जारी रहेकै समयमा विवाद भएपछि छाडेर हिडेको एपीएफले यसपल्ट सोही प्रतिस्पर्धी प्रदेश १ लाई पराजित गरी स्वर्ण जित्यो । महिला भलिबलमा एपीएफको दवदवा कायमै रह्यो ।
एथ्लेटिक्सको १ सय मिटर दौडमा यामसाजन सुनुवारलाई हराएर एपीएफका आशिष चौधरी सबैभन्दा तीव्र गतिका नेपाली धावन बने, आर्मीका कृष्ण चौधरीले पुरुष म्याराथनमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट टाइमिङका साथ स्वर्ण जिते । उनले २ घण्टा १७ मिनेट ३३ सेकेण्डमा दूरी पूरा गरे ।
भारत्तोलनमा नेपाल पुलिस र आर्मी क्रमसः महिला र पुरुषतर्फ च्याम्पियन बने । तेक्वान्दोमा नेपाल पुलिसले बाजी मार्यो । उसुमा आर्मी टिम च्याम्पियन बन्यो । प्याराग्लाइडिङमा पनि आर्मीकै खेलाडीहरू अगाडि देखिए ।
आठौं खेलकुदको मुख्य खेलस्थल बाँके जिल्ला हो । यहाँ १७ खेलका १९ स्पर्धा सञ्चालन गरिएको थियो ।
बाँकी बर्दिया, दाङ, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सञ्चालन गरियो । बाँकेमा सञ्चालन भएका खेलका लागि व्यवस्थापनको समस्या देखिएन । नेपालगञ्ज शहरको सम्पन्नताले व्यवस्थापनमा कमी हुन दिएन । अन्य जिल्लामा देखिएको व्यवस्थापनको लापरबाहीको भने खेलाडीहरूले नै दुखेसो गरे ।
एकान्तमा निर्माण गरिएका खेलस्थलका कारण खेलाडीहरूलाई खानपिनमा समस्या भएको थियो । दाङको बेलझुण्डीस्थित रंगशाला वरपर सामान्य होटनसमेत नहुादा खेलाडीले चाउचाउ खाएर भोक मेटाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
यातायातको समस्याले पनि टोली समयमै खेलस्थल पुग्न नसकेको तथा फर्केर होटल आउन नसकेको देखियो । गर्मीका कारण खेल बिहान र बेलुकीको समयमा खेल आयोजना गर्ने भनिए पनि केहि खेलहरू प्राविधिक कारणले दिनभर सञ्चालन हुँदा खेलाडीहरूलाई कठिन भएको थियो ।
आठौं खेलकुलको स्थानीय आयोजक मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओलीले केही पूर्वाधारहरू मानववस्तीभन्दा टाढा भएकाले खेलाडीलाई पारबहन र खानपिनमा समस्या भएको बताए । उनले थपे, ‘खेलाडीले खेल्नै नपाउने, खानै नपाउने र बस्नै नपाउने अवस्था होइन ।’
घरेलु खेलकुदको महामेला आयोजनाको अधिकार पाएलगत्तैदेखि प्रदेश ५ ले पूर्वाधार तयारी सुरु गरेको हो । २ वर्षको समयमा पनि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नभएपछि निर्माणाधीन पूर्वाधारमै अधिकांश खेल आयोजना भएका थिए । अरु त अरु नेपालगञ्ज रंगशालामा राष्ट्रति भण्डारीले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दा त्यहाँको भीआईपी प्यारापिट निर्माणको काम जारी थियो ।
आठौं खेलकुदका लागि पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै प्रदेश ५ का १ अर्वभन्दा बढी लगानी गरिएको छ । २५ करोड लागतमा नेपालगञ्ज रंगशालाले पुनर्जीवन पाएको छ । अहिलेसम्म पनि रंगशालाको भीआईपी प्यारापिट निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छैन । १५ करोड लगानी गरिएको पौडी पोखरी निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीय होटलमा प्रतियोगिता सञ्चालन भयो ।
आठौंका लागि नेपालगञ्जमा जुडो हल, शुटिङ रेञ्ज, भारत्तोलन एकेडेमी, कवर्डहल स्तरोन्नत्ति, खजुरामा भलिबल एकेडेमी निर्माण भएका छन् । जुडो हल र भलिबल एकेडेमीबाहेक सबै पूर्वाधारको काम सम्पन्न हुन बााकी छ । दाङको बेलझुण्डीमा रंगशाला र एथ्लेटिक्सको सेन्थेटिक ट्याक निर्माण भएको छ । जहाँ २५ करोड लगानी गरिएको छ । घोराहीमा बास्केटबल कोर्ट, रुपन्देहीमा सिद्धार्थ रंगशाला स्तरोन्नत्ति र टेनिस कोर्ट निर्माण गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले प्रतियोगिता सम्पन्न हुनुमा मात्र होइन आफ्नो प्रदेशमा ठूलो मात्रामा पूर्वाधार निर्माण भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रतियोगिताकै लागि १ अर्वभन्दा बढी लागतमा बनेका खेल पूर्वाधारले हाम्रो प्रदेशलाई काठमाडौंपछिकै खेल पूर्वाधार सम्पन्न प्रदेशको रुपमा उभ्याएको छ, यसको उचित सदुपयोग गर्न सके पश्चिम नेपालका सबै जिल्लाका खेलाडी र खेलस्तर बढाउन अहम भूमिका खेल्नेछ ।’
राष्ट्रिय खेलकुदको ३७ वर्ष लामो इतिहासमा ८ पल्टमात्र प्रतियोगिता आयोजना भएको छ । हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने प्रतियोगिता यसपटकदेखि नियमित सम्पन्न हुनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नवौं राष्ट्रि खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा गण्डकी प्रदेश खेलकुद बिकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले आफ्नो कार्यकालमा दुईपल्ट राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेर लामो समयदेखि जारी बेथितीको अन्त्य गरेको दावी गरे । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय खेलकुद समयमै आयोजना गर्न ठूलो कसरत गर्नुपर्‍यो, खेलाडीलाई राष्टो गहना भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ । नियमित प्रतियोगिता खेल्न पाउने उनीहरूको अधिकार कसैले खोस्न पाउँदैन । हामीले त्यही गरेका छौं,’ सदस्यसचिव विष्टले भने ।
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:२२